संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको ओज
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले व्यवसायीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको खर्चबाट नेतालाई चुनावी खर्च दिन सुझाए । मन्त्रीको भनाइलाई पत्याउने हो भने चुनावताका उद्योगी व्यँपारीबाट चन्दा लिएकै भरमा व्यवसायीले मूल्यमा मनपरी मच्चाउँदा राज्य सञ्चालकहरू रमिते बन्नुपर्ने स्थिति...
युवा उद्यमशीलताका लागि धेरै अवसर छ
उद्यमशीलताको विकासमा व्यक्ति, परिवार, संगठित संस्था सबैको भूमिका बलियो हुन्छ । हाम्रो सामाजिक परिपाटीले ल्याएका पेशागत विभाजनकाले हाम्रो उद्यमशीलतालाई कतै कुण्ठित गरेको हुन सक्छ । शिक्षा प्रणालीले डिग्री दिन्छ । यसले हामीलाई ज्ञान र शीप पनि दिनुपर्छ । शिक्षाले सधैं अन्वेषणको परिपाटी विकास गर्दै लैजा...
वित्तीय समावेशिताको विस्तार
कुनै पनि मुलुकको दिगो विकासका लागि वित्तीय समावेशिताको प्रमुख भूमिका हुन्छ । वित्तीय पहुँचको अभावमा जनजीवन समृद्विको मार्गमा अग्रसर हुन सक्दैन र हरबखत अस्थिरता र पछौटेपनको शिकार भइराखेको हुन्छ । देशको बहुसंख्यक जनतामाझ वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन नसक्दा सो देशको आर्थिक अवस्था समेत स्थायित्वबा...
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पुनप्रशोधन
स्वीडेनले मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट निस्केका फोहोरमैला संकलन गरेर अधिकांश फोहोरलाई पुनप्रशोधन गर्दो रहेछ । आफ्नो मुलुकमा निस्कने फोहोरमैलाले त्यहाँ भएका पुनप्रशोधन गर्ने कारखानाहरूलाई कच्चा पदार्थ नपुगेर स्वीडेनले अन्य छिमेकी मुलुकलाई समेत फोहोरमैला पठाउन प्रोत्साहन गर्दो रहेछ । स्वीडेनका घरहरूबाट निस...
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मात्र आगामी १ वर्षभित्र सबै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको लागि पूँजी पर्याप्तता अनुपातमा अतिरिक्त २ प्रतिशतका दरले ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लगाउने निर्देशन जारी गरेपछि त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा एक किसिमको हल्लीखल्ली मच्चाएको छ । विश्वव्यापी रूपमा बैंकहरू...
नेपाल स्वतन्त्र भए पनि भूपरिवेष्टितताले गर्दा चारै तिरबाट घेरिएको छ । स्वतन्त्र भएर पनि हाम्रा प्रत्येक दैनिकीहरू परनिर्भर छन् । एउटा रू. ३०० पर्ने छाता बनाउन सकिएला । तर, त्यो ३०० को छाताका प्रत्येक पार्ट नेपालले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त अनुसार हाम्रो उत्पादनभन्दा आयात सस्त...
विक्रम संवत् २००७ साल यता उन्नतिका लागि भनेर तीनओटा व्यवस्था फेरिए र मुलुक अहिले चौथो व्यवस्थाको प्रयोगमा अभ्यासरत छ । यस अवधिमा दर्जनौं सरकार बने । योजना, नीति, रणनीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना आदि सयौंको संख्यामा पुगे होलान् । सिँगो कर्मचारीतन्त्र, कूटनीतिक निकाय, अनुसन्धानकर्ता तथा निजीक्षेत्र निकास...
मुटु दुखेको दिन डा. भगवान कोइराला सम्झन्छौं तर मन दुखेको दिन कसलाई सम्झिने ? अलौकिक कुरा गर्ने साथीलाई ठट्टैठट्टामा पाटनमा भर्ना हुन सुझाइन्छ तर साँच्चीकै पाटन जानुपर्नेहरूको अवस्था के छ ? विरक्तिमा भासिएका जनता समग्र राष्ट्रकै लागि बल्झिरहने शूल हुन् । कर्णालीमा एउटा गीत छ ‘दुःखले...